राजधानीमा होडिङ बोर्डको जात्रा ! – Everest Dainik – News from Nepal
राजधानीमा होडिङ बोर्डको जात्रा !
धेरैको सपनाको सहर काठमाडौं हिजोआज दिनप्रतिदिन कुरुप बन्दै गइरहेको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता हराउँदै गइरहेको छ । उफ जत्ताततै घरैघर हरियाली देख्नै गाह्रो छ । हरियाली हेर्नका लागि या त घरको छतमा जानु पर्ने या त दूरवीनको सहायता लिनुपर्छ यहाँ ।
मानिसहरुको बढ्दो चापसँगै थपिएका घरहरु अनि अव्यवस्थित सवारीसाधन त्यसैमाथिको घण्टौंको लामो ट्राफिक जाम अत्यास लाग्दो यात्रा । विकासका नाममा भत्काइएका सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे अनि पानी पर्दा हिलाम्मे बन्छन् । त्यससँगै प्रतिष्पर्धाका नाममा तीव्रगतिमा दौडिने अनगिन्ती सवारीसाधनका कारण यहाँका सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् ।
व्यवसायिक उर्भर केन्द्र मानिने राजधानीमा व्यवसायी प्रचार र प्रवर्द्धनका लागि होडिङ बोर्डको प्रयोग गरिन्छ । आफ्नो सामानको प्रचारका लागि प्रयोग हुने होडिङ बोर्डहरु जताततै राखेका पाइन्छन् । निश्चित मापदण्ड पुर्याएमा यसलार्इ राख्नु त स्वभाविकै हो, तर छत, कार्यालयको ढोका, झ्याल नै छोप्ने गरी राखिएका होडिङबोर्डहरुले शहर नै कुरुप बनाइरहेका छन् । यतिमात्रै होइन, आकाशे पुल र रुखहरुमा समेत अचेल होडिङ बोर्ड झुण्याइएको पाइन्छ ।
राजधानीको चावहिल, गौशाला, पुतलीसडक, नयाँबानेश्वर, गोंगबुलगायतका व्यस्त शहरहरुमा व्यानर र होडिङ बोर्डको जात्रै छ । ती स्थानहरुमा देख्दा कार्यालय र उत्पादित वस्तुहरुको भन्दापनि होडिङ बोर्डको मेला जस्तो लाग्छन् । होडिङ बोड राख्नका लागि प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ । आफ्नो सामान स्तरीय छ भनि होडिङ बोर्डमार्फत देखाउन चाहन्छन् व्यापारीहरु तर, यो सही नीति भने होइन । मिडियाहरुकाे यत्राे विकास भएकाे छ, टिभी, रेडियाे, अनलाइनमार्फत व्यापारीहरुले अाफ्नो सामानकाे विज्ञापन गराउन सक्छन् । तर हाेइन उनीहरुले होडिङ बोर्डलार्इ नै महत्वका साथ हेर्छन् अनि होडिङ बोर्ड निर्माणमा लागिपर्छन् ।
यसरी कार्यालय र घरहरु नै ढाक्ने गरी राखिएको होडिङ बोर्डका बारे सम्बन्धित निकाय अनविज्ञ भने हाेइन । काठमाडौंको शहर सफा राख्ने जिम्मा पाएको काठमाडौ महानगरपालिकाले यस्ता मापदण्ड विपरितका होडिङ बोर्डहरुलाई हटाउन सकेको छैन । केही समयअघि यसरी मापदण्ड विपरित राखिएका होडिङ बोर्डहरु हटाउने योजना अघि सारेपनि कार्यान्वयन भएको पाइदैन । सोही समयमा डिजिटल होडिङ बोर्ड हटाउन महानगरपालिकालाई हम्मेहम्मे भएको थियो । डिजिटल मुस्किलले हटाएको महानगरलाई मापदण्ड विपरितका होडिङ बोर्डहरु हटाउन भने उसको जोड चलेन ।
काठमाडौ महानगरपालिकाले यस्ता मापदण्ड विपरितका होडिङ बोर्डहरुलाई हटाउन सकेको छैन । बारम्बारकाे प्रयास पनि असफल बनेकाे छ ।
मापदण्ड पुर्याएर बाटोबाट १० फिट टाढा निश्चित आकारमा तोकिएको स्थानमा राख्दा बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्युनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने जानकारहरु बताएँछन । तर जथाभावी राखिएका होडिङ बोर्डले दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । महानगरपालिकाले समय–समयमा यस्ता मापदण्ड विपरितका होडिङ बोर्डहरु हटाउने प्रयास गरेतापनि आवश्यक कारबाही नगर्नाले यसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
यसरी जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्नाले सहरको सौन्दर्यमा ह्रास त आउँछ नै सडकको माथि राखिएका होर्डिङ बोर्डहरु हावाहुरीले वा पुराना भएर झर्दा ठूला दुर्घटनासमेत हुने गरेका छन् । त्यस्तै टिलिक्कै टल्किने होर्डिङ बोर्ड सडकको बीच भागमा वा आकाशे पुलमा राख्नाले सवारी चालकहरुको ध्यान त्यता जान सक्छ । त्यसबाट पनि दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिन अब ढिलो गर्नुहुँदैन । महानगरपालिकाको एक्लो पहलले मात्रै यो सम्भव छैन । यससँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउन र व्यवस्थित गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरे राजधानीको सौन्दर्य बचाउन सकिन्थ्यो कि ।
ट्याग्स: Kathmandu, pushpa mahara